Zidane oo kaliya shaqadiisa ku badbaasan kara ku guuleysiga champions league.
Home Horyaalka Spain Zidane oo kaliya shaqadiisa ku badbaasan kara ku guuleysiga champions league.
Janaayo 2021 waxay u aheyd bil xun kooxda Real Madrid garoonka dhexdiisa Waxay soo galeen sanadka cusub iyagoo wata afar koob oo loogu talagalay qabashada, laakiin hadda, waxay umuuqataa inay kaliya ku guuleysan karaan mid.
Waxaa si la yaab leh loogu garaacay semi-finalka Spanish Super Cup 1-2 oo ay ka saartay Athletic Bilbao Dhowr maalmood ka dib waxaa laga ciribtiray Copa del Rey 32-kii ugu dambeeyay kooxda heerka saddexaad ee Alcoyano Madrid ayaa looga badiyay 2-1.
Kahor iyo ka dib guuldarooyinkaas koobkaas Real Madrid ayaa dhowr jeer ku soo qasaartay La Liga taas oo gelisay xaalad aad u adag Waxay 10 dhibcood ka dambeeyaan hogaamiyaasha Atletico Madrid oo iyagana gacanta ku haya ciyaar baaqi u ah Si ay wax uga sii daraan sidoo kale Barca oo soo martay dhibaato badan ayaa sidoo kale ka hormartay kooxda daafacaneysa horyaalka xagaa gool dhalint halka Sevilla iyo Villarreal ay ku dhow yihiin rea madrid.
Iyagoo caqabad ay ku tahay aan la rumeysan karin Atletico Madrid xidigaha Zinedine Zidane waxay leeyihiin hal fursad oo ugu dambeysa oo ay ku heysan karaan Zidane Taasi oo ah koobabkii uu jeclaa Zidane ee Champions League hadii uu Ku guuleysto tartankaas ayuu badbaadi doono xilli ciyaareedka Madrid iyo Zidane laakiin wuxuu sidoo kale ka horjoogsan karaa in Zidane laga ceyriyo.
Zidane wuxuu ku guuleystay Champions League seddex jeer oo isku xigta xilli ciyaareedkii 2015-16, 2016-17 iyo 2017-18 waxaana ay eheed Rikoor Sedax Jeer Xariir ah oo kooxi weligeed Sameynin
Si kastaba ha noqotee, xilli ciyaareedkan wuu ka duwan yahay madaama aysan heysan Cristiano Ronaldo. Wuxuu fure u ahaa iyaga oo ku guuleystay Champions League afar jeer intii uu joogay.
In kasta oo taasi jirto, Zidane iyo kooxdiisu waxay isku dayi doonaan intii karaankooda ah inay ku guuleystaan iyada oo aan Boortaqiiska la helin. Waa todobo kulan oo ka fog kor u qaadista koobka. Marka hore, waxay wajahayaan Atalanta laba lugood wareega 16ka Real Madrid ma ahan kuwa ugu cadcad inay ku guuleystaan koobka laakiin kooxda ayaan heysan wax xulasho ah, laakiin waa inay isku dayaan oo ay ku guuleystaan Champions League si ay u badbaadiyaan Shaqa Zinadine Zidane.
Previous articleVan de Beek oo Sii Joogi doono kooxdiisa Man united.
Next articleWararka Xanta Suuqa kala iisbiga iyo Wargeysyada Yurub ee maanta: Upamecano, Caleta-Car, Marcelo, Williams, Hakimi, Barkley